FOR: Babel Tower, Taallada Nebukadnesar, Baarlamaanka Yurub Tour. | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Dhulka ayaa Aasiiriya ka dib markii daadka, nin abuuray boqortooyadiisa ah oo la dhisay Sennar dooxada munaarad in gaari lahaa samada.
Laakiin Ilaah wuxuu kala gooyey ay mashruuca by mugdiga galinaya afkooda, midoobeen ilaa markaas, oo kala firdhiyey inay dusha sare ee dhulka iyaga.
Kumanaan sano ka dib, dhulka ayaa la Aasiiriya mar kale ka dib dagaalkii labaad ee adduunka, nimankii inkastoo luqado kala duwan dhisay munaarad cusub ee Strasbourg si ay astaan ​​u dhiska ee boqortooyadiisa ka mid ah ragga.
Waxaan ku arki kartaa mid ah labada munaaradaha ee uncompleted iyo magaca boqortooyadiisa oo cusub taas oo ka dhigaysa tilmaan ah kuma sheegin Ilaah laakiin ilaahnimadiisa been ah « YURUB ».
Waa sida haddii nin oo doonayay in ay ka soo hor jeedaan doonista Ilaah oo isaga diidi u gudbinaayo ilaahyo been ah iyo qaadato ilaa dhowr kun oo sano ka dib u dhiska Empire dadka.
Our ilbaxnimada reer galbeed ah calaamad by dhismaha Yurub oo bilaabay la boqortooyadii Greek dumi doonaa waxa la idin ​​kaga baxaan Greece ka zone Euro ah. (Alfa iyo Oomeega)
Laga yaabaa inaan jawaabaha qaar ka mid ah aayadahan.
Daniel, Cutubka 2aad, in 31-35
31 « Waad Boqorow, aragti ahayd,. Halkan: taalo, taalada weyn, aad u dhalaalaya, waxaad hor istaagay, cabsi badan si ay u arkaan.
32 taalada Tani, oo madaxiisa wuxuu ahaa dahab wanaagsan, oo ay xabadka iyo gacmaha oo lacag ah, caloosheeda iyo bowdooyinkeeduna oo naxaas ah,
33 addimmadiisa bir ah, cagaha birta iyo dhoobada qayb qayb uu.
34 Adigu waxaad aragtay, si lama filaan ah dhagax lagu gooyn aan gacan la taabtay, oo wuxuu ku dhuftay taalada, cagaha birta iyo dhoobada ay, oo wuxuu ku jejebiyey.
35 Markaas waxaa loo jebiyey, oo dhan hal mar, birta iyo dhoobada, oo naxaas ah, iyo lacag iyo dahab, noqdaan sidii xaab oo kale hadhuudhka lagu tumi jiray xagaaga, dabayl baana la tagtay qaaday iyada oo aan wax raad ah. Markaasaa dhagaxii ekaanta ku dhacay wuxuu noqday buur weyn, oo dhulka oo dhan buuxiyey.
Greece tii dhagax yar sida taalada Nebukadnesar oo ahaa, jari doonaa, oo hoos u soo boqortooyadii YURUB si ay u noqdaan u ishaartay xaggiisa ilbaxnimada cusub ka yar boqortooyadii Ciise Masiix!
Waa maxay Ilaaha samayn doonaa waqtigan, waxaan ka ogahay xagga wax sii sheegidda Bible tan iyo markii ay maalin kasta u qabtaan iyo Cidday u natiijada noqon doonta soo celinta Ciise Masiix on Earth!
Oo soo socda ugu dhakhsaha badan!
Su’aasha waa in aan weydiisan nafteena waa in aan si gaar ah u baxsado masiibooyinka laga cabsado oo masiibooyinka ku dhuftay in dunida iyo aadanaha oo haddii aynu qayb ka mid ah kuwa ugu nasiibka badan oo arki doonaa soo celinta jirka ah Rabbigeenna Ciise Masiix on Buur Saytuun noqon doonaa .
Fadlan aan Brothers jecel yahay iyo Sisters in Masiixa doonayaan inay si fiican ula xiriiraan xiriirada oo dhan link this gelitaan toos ah oo dhan articles aan: